Xaqiiqooyin aad uga baahan tahay inaad ogaato ka hor kulanka caawa ee Manchester United iyo Copenhagen – Gool FM
(Yurub) 10 Agoosto 2020. Kooxaha Manchester United iyo FC Copenhagen ayaa caawa ku ballansan siddeed dhammaadka Europa League, kooxdii adkaata ayaana gaari doonta afar dhammaadka tartankan.
Ma jiri doonto labo lug waxaana lagu kala baxayaa hal lug oo kaliya iyadoo kooxda gudbaysa ay go’aamin doonto 90’daqiiqo ee kulankan caawa.
Haddaba waxaan halkaan hoose idin kugu soo gubinaynaa xaqiiqooyin aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor kulankan Man United iyo Copenhagen.
>- Manchester United iyo FC Copenhagen ayaa kaliya labo jeer hore u kulmay, iyagoo midba tan kale la ciyaaray xilli ciyaareedkii 2006-07 wareegga group-yada ee Champions League – Red Devils ayaa 3-0 ku adkaatay kulankii ka dhacay Old Trafford ka hor inta aysan guuldarro 1-0 ka soo gaarin Copenhagen.
>- 10-kii isku-day oo ay hore u sameysay Kooxda Copenhagen kaliya hal guul ayay tartammada Yurub kaga gaartay kooxda Ingiriiska ah, waxaana kulankaasii ay ka hortageen Manchester United bishii November ee sanadkii 2006, waxaana ay ka haysataa 4 barbaro iyo 5 guuldarro, iyagoo ku guuldarreystay inay gool dhaliyaan afartoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajaheen kooxda Ingiriiska.
>- Waa markii ugu horreysay ee kooxda Copenhagen ay soo gaarto siddeed dhammaadka Europa League taariikhdeeda, halka sidoo kale ay yihiin kooxdii ugu horreysay ee Danish ah oo soo gaarta siddeed dhammaadka tartammada Yurub tan iyo Brøndby IF oo soo gaartay siddeed dhammaadka UEFA Cup xilli ciyaareedkii 1996-97, Brøndby IF sidoo kale waa kooxda kaliya ee Danish ah oo gaartay semi-finalka tartan Yurub ah, waxaana ay gaareen afar dhammaadka UEFA Cup kal ciyaareedkii 1990-91.